Jubaland oo maanta soo af-meeraysa doorashada Kismaayo | KEYDMEDIA ENGLISH
Jubaland oo maanta soo af-meeraysa doorashada Kismaayo
Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee heer Dowlad Gobolleed ee Jubbaland (SEIT), ayaa maanta soo gabagabeynaya doorashada kuraasta taallay Kismaayo.
KISMAAYO, Soomaaliya – Dowlad gobolleedka Jubbaland, ayaa maanta la filayaa in ay soo gabagabeyso doorashada kuraastii taalay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose, xilli ay caqabad xooggan ka taagan tahay doorashada Gobolka Gedo, gaar ahaan Garbahaarray.
Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee heer Dowlad Gobolleed ee Jubbaland (SEIT), ayaa hore u shaaciyay Guddiga Xulista Ergooyinka, kuraasta kala ah; HOP#133 iyo HOP#219, kuwaas oo doorashaduudu maanta ka dhaceyso degaan doorashada 1-aad ee Kismaayo.
Kursiga HOP#133, oo hore u ahaa qoondo dumar, isla-markaana ay Baarlamaankii 10-aad ku fadhisay Luul Cabdi Aadan, ayaa tartankiisa loo xiray rag kaliya, waxaana la filayaa inuu ku soo baxo, Musharrax Xildhibaan Maxamuud Axmed Xasan, oo la baratamaya Maxamed Xassan Aadan.
Qorshaha Kursiga HOP#133, waxuu ahaa in lagu doorto Gobolka Gedo, waxaana leh beesha Geeledle oo ka tirtan beelaha Mirifle ee Raxanweyn, waana mid ka mid ah kuraasta uu ku tashanayay Farmaajo, hayeeshee, ugu danbeyn ka dhaadhacay xerada Axmed Madoobe ee Kismaayo.
Luul Cabdi, oo ka mid ahayd taageerayaasha Farmaajo, isla-markaana si aan qarsoodi ahayn, xilliyo kala duwan u af-lagaaddeysay, RW Rooble iyo Xildhibaanno ku heyb ah, si ay u qanciso Farmaajo, ayaa dhawaan sheegtay in Axmed Madoobe u diiday in ay ka degto degaan doorashadeeda.
Kursiga HOP#219, oo Baarlamaankii 10-aad uu ku fadhiyay Cabdifitaax Maxamed Cali, ayaa hadda loo wareejiyay qoondo dumar, waxaana sida la rumeysan yahay ku soo bixi doonta, Roodo Carab Cabdi, halka sidoo kale, shahaadada tartan la siiyay Faadumo Cabdi Cali.
Dhamaan kuraasta lagu doortay Kismaayo, waxaa ku soo baxay shaqsiyaad uu Axmed Madoobe watay, waxaana tartanka kuraasta laga hor istaagay inta badan xildhibaannadii hore ugu fadhiyay, gaar ahaan, kuwii aan ku aragtida ahayn maamulka Kismaayo.
Dhameystirka Doorashada kuraasta Kismaayo, ayaa ka dhigan in xogga la saari doono qabashada doorashada Gedo, taas oo wararka qaar sheegayaan in laga wareejinayo Garbahaarrey, loona rarayo degmada Ceelwaaq oo Axmed Madoobe ka taliyo.
kuraasta taalla Gedo, ayaa muddaba ahaa caqabadda ugu weyn ee hor taagneyd doorashooyinka, hayeeshee, dhawaan Af-hayeenka FEIT ayaa sheegay in doorashada Guddoonka baarlamaanku aysan u xirnaan doonin kuraasta Gedo.